Myanmar Music Art | Cover သီချင်းများ
G-Family က Chan Nyein Ko (CNK) ရဲ့အသစ်ထွက်Albumပါ။အရမ်းမိုက်ပါတယ်။အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။ Original အခွေကိုဝယ်ယူအားပေးရင်းကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုကူညီပါ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite
Red Ballon – Charlie XcX
ဘော်ဒါတွေလည်း ” Home ” ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးကို ကြည့်ဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ် အဲ့ကားလေးမှာ တနေရာစာပါဝင်တဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ဖြစ်ပြီး အဆိုတော် ” Charlie XcX ” သီဆိုပေးထားတဲ့ ” Red Ballon ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အားလုံးနားဆင်လို့ ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် နားဆင်ကြပါအုန်းဗျာ…… Movie Sound Track ကို ဒီမှာကြည့်ပါဗျာ….. Mp3 ကိုဒီမှာဒေါင်းယူပါဗျာ…… Favorite
[pro_ad_display_adzone id=”3692″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] လူကြိုက်များခဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ ” Home ” ဆိုတဲ့ ဇတ်ကားလေးမှ လူသားနဲ့ဂြိုလ်သားတို့ ရဲ့ မေတ္တာ တရားကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဇတ်ဝင်ခန်း သီချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးနှစ်သက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ကြပါအုန်းဗျာ…… MTV ကိုဒီမှာကြည့်ပါ Mp3 ကိုဒေါင်းယူရန် Favorite
Love Me Like You Do – Elie Goulding
[pro_ad_display_adzone id=”3692″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] လူကြိုက်အရမ်းများခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားလေး တခုဖြစ်တဲ့ ” Fifty Shades of Grey ” ဇတ်ကားမှ ဇတ်ဝင်သီချင်းလေးကို အားလုံးနားဆင်လို့ ရအောင်ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ ကောင်မလေးက သူ့ တကိုယ်လုံးကို ပုံအပ်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်သာပြုလုပ်ပါလို့ကောင်မလေးဘက်ကနေ ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်ချစ်သွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေပေးဆပ်ချင်သလဲဆိုတာကို မိန်းကလေးဘက်ကနေ ဖွင့်ဟထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲခံစားနားဆင်ကြပါအုန်းဗျာ….. MTV ကိုဒီမှာကြည့်ပေးပါဗျာ… MP3 ကိုဒီမှာဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ…….. Favorite
We Can’t Stop – Miley Cyrus (Boyce Avenue feat. Bea Miller cover) on Apple & Spotify
Miley Cyrus ရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းဖြစ်တဲ့ We Can’t Stop သီချင်းကို Cover ပြန်ဆိုထားတာပါ။ လန်းတယ် နော်။ MTV ကြည့်ပါအုံး။ Favorite
Lay Phyu (Yone Kyi Yar) By Manger “Cover”
လေးဖြူရဲ့ Yone Kyi Yar သီချင်းကို Cover ဆိုထားတာပါ။ နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ Favorite
Aung Htet (အိမ်မက်ဆုံရာ) Mp3 Collection 84 views
အနီးဆုံးရန်သူ – Wai La 42 views
လေလွင့်သူ – Lay Phyu 27 views
တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် – ရွှေထူး 26 views
အခုလောလောဆယ် – Wanted 25 views
Aung Htet (အိမ်မက်ဆုံရာ) Mp3 Collection 744 views
အနီးဆုံးရန်သူ – Wai La 312 views
တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် – ရွှေထူး 307 views
ယုံကြည်ရာ – လေးဖြူ 255 views
တုနိူင်းမဲ့ရတနာ – ထူးအိမ်သင် 228 views
G-Fatt Collection 746 views
အမှန်တရား – လင်းလင်း 411 views
မျှော်နိုင်သမျှ Album 375 views
City FM 14th Anniversary 308 views
စဉ်းစားပါ – လင်းလင်း 176 views